Momba anay - Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
Shinva Medical Instrument Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 1943 ary voatanisa ao amin'ny Shanghai Stock Exchange (600587) tamin'ny volana septambra 2002.
Izy io dia vondrona indostrian'ny fahasalamana an-trano mitambatra amin'ny fikarohana siantifika, famokarana, varotra, serivisy ara-pahasalamana ary lozisialy ara-barotra amin'ny fitaovam-pitsaboana sy fanafody.
Amin'ny sehatry ny fitaovam-pitsaboana, natsangana ny làlan'ny vokatra sivy mandroso miaraka amin'ny fikirakirana tsara sy ny haitao feno, manarona ny fanaraha-maso ny aretina, ny radioterôma ary ny sary, ny fitaovana fandidiana sy ny orthopaedika, ny injeniera sy ny fitaovana fandidiana, ny kojakoja nify ary ny azo ampiasaina, ny otrikaina diagnostika zavamaneno, akora biolojika ary fanjifana, fitaovana dialyzy sy fanjifana, fiarovana ny tontolo iainana ara-pahasalamana sy sehatra hafa. Amin'izao fotoana izao, ny isan-karazany sy ny vokatra avoakan'ny fitaovana fanaraha-maso ny aretina dia mitana ny laharana eo an-tampon'izao tontolo izao. Ny R&D sy ny famokarana fitaovana radiotherapy dia lehibe amin'ny ambaratonga, feno isan-karazany, avo lenta amin'ny tsena anatiny ary mitarika amin'ny haavo teknika.
Ao amin'ny sehatry ny fitaovam-panafody dia misy ivon-teknolojia lehibe efatra: fotodrafitrasa biolojika, fampidirana manokana, fanomanana fanafody nentim-paharazana sinoa ary fanomanana mafy. Mampifandray ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny varotra fitaovam-panafody. Ho fanampin'ny famokarana fitaovam-panafody mahazatra, dia manome ny trinite ny "haitao fanafody, kojakoja fanafody ary injenieran'ny fanafody" miaraka amina serivisy avo lenta. Mandritra izany fotoana izany dia manome ny serivisy fonosana manontolo amin'ny fananganana fanafody simika, fanafody biolojika ary ozinina fanafody ary mamaha ny ahiahy rehetra ho an'ny mpanjifa.
Eo amin'ny sehatry ny serivisy ara-pitsaboana, Shinva dia nanatsara hatrany ny fifaninanana marika sy ny lazany. Miantehitra amin'ny fampiasam-bola matihanina, fananganana, fandidiana, fividianana ary serivisy serivisy, dia hanangana vondrona hopitaly moderina miaraka amina foto-kevitra ara-pitsaboana mandroso, haavo fikarohana siantifika farany, rojom-pitantanana marika ary fampidirana loharanon-karena voajanahary.
Ao amin'ny sehatry ny fitsaboana sy ny varotra, mavitrika i Shinva mamaly ny lamina sy ny fiovana eo amin'ny tsena vaovao, mitazona ny fifaninanana maharitra sy ny fivelarana ara-pahasalamana maharitra ary manao fikarohana modely sy fanavaozana ny maodely.